Sisoloko sixelela abathengi bethu ukuba akwanelanga ukubhala nje iiposti zebhlog. Nje ukuba iposti yakho ibhalwe, kuya kufuneka wazise abaphulaphuli ekujoliswe kubo ukuba ikho… oku kunokufezekiswa ngokupapasha isingeniso kuTwitter, kuFacebook, ukuyithumela kwezinye iisayithi, ukuthumela izaziso zabamkeli bakho beimeyile, kunye nokuyithumela kubhukmakhi yentlalo iisayithi kuyo yonke indawo. Uninzi lwabantu alubuyeli kwindawo yemihla ngemihla kwaye bambalwa abaya kubhalisela ukutya kwakho. Ngakumbi nangakumbi, abantu baxhomekeke kukuncitshiswa kwenethiwekhi yabo. Ke… ukuba unqwenela ukuba umxholo wakho ufumaneke, umxholo wakho kufuneka uxoxwe ngaphakathi kwezo nethiwekhi!
I-infographic enkulu, @andreealaunchgrowjoycom: disqus! Kwaye ukunyusa sisitshixo kuso nasiphi na isicwangciso somxholo.
Isikhokelo seGurugal Frugal
Uninzi lwezi zichasene ne-TOS yamasayithi eendaba ezentlalo, kwaye abanye baya kohlwaywa nguGoogle.
Sebenzisa iiforamu yindlela elungileyo yokufunda, yokwabelana, kunye nokwazisa ngaxeshanye! Khumbula nje ukupapasha ezona zinto zibalaseleyo kwindawo yakho ngaphambi kwenye indawo.
Ukuphawula kudlala indima ephambili kwimpumelelo yebhlog. Imidiya yokuncokola inceda kakhulu ekumakisheni.
Enkosi ngolu hlobo luneenkcukacha. Imidiya yokuncokola, umququzeleli oqinisekileyo!
Ewe iposti enkulu malunga nokukhuthaza ibhlog.
Ukuqhuba ibhlog ngokufanelekileyo, Kuya kufuneka sibenabafundi abaqhelekileyo kwaye sifumane abafundi rhoqo, Kuya kufuneka sikhuthaze iibhloko zethu rhoqo.
Ukunyuswa kwebhlog kubaluleke kakhulu kule mihla. Kuya kufuneka sibenakho ukutsala abafundi amehlo.
Ndiyithanda kakhulu indlela yeblog pormotion oyichazileyo apha kwaye ndivumelana ngokupheleleyo nawe. Ngokulandela ezi ndlela, Singaqhuba abafundi rhoqo kwibhlog yethu.
Njengoko ndicinga, ukufumana abafundi abathembekileyo rhoqo, Kuya kufuneka sibhale umgangatho ophezulu kwaye sibandakanye umxholo kuba umxholo kuphela kwento enokutsala abafundi abavela kwimithombo eyahlukeneyo nokuba yimithombo yeendaba yoluntu okanye ukufikelela kwi-imeyile. Umxholo kufuneka ube namandla okutsala abafundi.
Kunye nezi ndawo, amaqela e-Facebook nawo anokubakho. Singaqhuba ukugcwala kwabantu abaninzi kunye nala maqela ukuba sibhale umxholo omangalisayo.
Ndiyavuya ukuba niyigubungele inqaku elimnandi kangaka. Enkosi ngokwabelana nathi. 😀